संसार तर्साउने कोरोनाको खतरनाक नयाँ भेरिएन्टः ‘ओमिक्रोन’ रोक्न नेपालको तयारी के ! – Janadesh Daily | ePaper
‘ओमिक्रोन’ देखिएपछि विश्वका विभिन्न मुलुकले धमाधम दक्षिण अफ्रिकासहित अफ्रिकी मुलुकसँग आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् भने छेउकै छिमेकी भारतले पनि कडा मापदण्ड लागू गरिसकेको छ। तर नेपालले अझै यसमा सजगता अपनाएको छैन।
स्वास्थ्य विज्ञले नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमिक्रोन’ भेटिएका मुलुकबाट आएका वा शंकास्पद व्यक्तिलाई अनिवार्य १५ दिन क्वारेन्टिनमा राख्न सुझाव दिए पनि यस विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन।
दक्षिण अफ्रिकामा गत मंगलबार कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ‘बी.१.१.५२९’ पत्ता लागेको हो। जसलाई वैज्ञानिकले ‘ओमिक्रोन’ नाम दिएका छन्। यो नयाँ भेरिएन्ट डेल्टाभन्दा बढी खतरनाक रहेको विज्ञले बताएका छन्। नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण दर अत्यन्त तीव्र हुने बताउँदै वैज्ञानिकहरूले यसविरुद्ध अहिले लगाइरहेका खोपले काम नगर्न सक्ने शंकासमेत व्यक्त गरेका छन्।
यसप्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) सहित विश्व नै चिन्तामा परेको छ। विश्वका धेरै देशले दक्षिण अफ्रिकासहित अफ्रिकाका ७–८ देशका विमान र यात्रुलाई प्रवेशमा रोक लगाइसकेका छन्। दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लेसोथो, इस्वाटिनी, मोजाम्बिक र मलावीबाट आउने उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
नेपालमा के छ तयारी !
आज आइतबार बस्ने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले नयाँ भाइरस रोक्न चाल्ने रणनीतिका सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले नयाँ भेरियन्ट फैलिएका देशबाट आउने नागरिकका सन्दर्भमा पहिले नै जारी भएको आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए।